Valy Bontana: Tolo-kevitry ny AFRINIC fa Hovidian-Dafo ny Fanakatonana Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Valy Bontana: Tolo-kevitry ny AFRINIC fa Hovidian-Dafo ny Fanakatonana Aterineto
Voadika ny 08 Mey 2017 18:38 GMT
Dokambarotry ny sibera iray ao Tanzania. Tafiditra ho firenena folo voalohany be mpisera indrindra eto Afrika i Tanzania. Sary Creative Commons avy amin'i Aslak Raanes, mpisera Flickr.
Mpiara-miasa amin'ny ICT Action Network (KICTANet na tambajotra kenyana amin'ny katroka teknolojian-torohay sy fifandraisana) i Grace Mutung'u. Mpiandraiki-draharaha ambony ao amin'ny OTF (Open Technology Fund) ao amin'ny Fanaraha-maso ny Torohay ao amin'ny Berkman Klein Center for Information and Society izy ankehitriny.
“Akatony ny aterineto dia ho esorinay aminareo io.” Izany indray no setriny vaovao avy amin'ny mpanandratenin'ny indostirian'ny fifandraisandavitra, amin'ireo governemanta afrikana mandrahona ny hanakatona ny aterineto rehefa miatrika fanjavozavoana ara-politika.
Nametraka volavola hanaisotra ny fidirana amin'ny aterineto amin'ireo governemanta manakatona ny aterineto ny mpikambana ao amin'ny African Network Information Centre (AFRINIC na Foiben-Tambajotra Afrikana Misahana ny Torohay). Araka ny nofariparitan'ny imailaky ny Rejisitra nasionaly [fr], raha mahomby izany dia hiafara amin'ny “fanakatonana ny aterineton'ny governemanta manakatona ny aterineto.” Ny Liquid Telcom sy ny Tespok, fikambanan'ny vondronasam-pifandraisandavitra no mpitari-dalana amin'ity tolo-kevitra ity.
Mahita avy hatrany ireo efa nanatri-maso ny fisongan'ity fironana mankany amin'ny fanapahana aterineto ity fa valy bontana izany. Saingy raha tanterahana izany dia tsy mazava raha mankany amin'ny tanjona tratrarina tokoa.
AFRINIC no tompon'andraikitry ny Rejisitra Reziônalin'ny Aterineto (RIR) eto Afrika amin'ny fanomezana adiresy IP sy laharana eto amin'ny kaontinanta. Ao amin'ny tolo-kevitra, nivoaka tamin'ny 10 Avrily 2017, faritan'ny mpanoratra ho mitranga ny fahatapahan'ny aterineto rehefa:
…rehefa azo porofoina fa misy ny fiezahana, nahomby na tsia, hametra ny aterineto amin'ny vondron'ny mponina tsy anavahana mpanome tolotra na fitaovana idirana ho amin'izany.
Misy moa ny fandrisihana fa holavina mandritra ny 12 volana ny adiresy IP sy ny laharan'ny governemanta mametraka fanapahana aterineto. Ho esorina mandritra ny dimy taona kosa ny an'ireo manao fanapahana in-telo na mihoatra ao anatin'ny folo taona.
Manazava ny antony ambadika i Andrew Alston, iray amin'ireo mpanolotra ny tolo-kevitra:
… Olana efa tokony noresahana hatry ny ela ity ary mino aho fa izao no fotoana ifanakalozan-kevitra amin'izany. Inona no tokony ataon'ny vondrom-piarahamonina, ny fikambanana I* ary ireo rafitra an'aterineto hafa rehefa miatrika fihoaram-pahefana avy amin'ny fanjakana ? (ny fikambanana i* dia ireo fikambanana afrikana mitantana ny aterineto, ohatra ny AFRINIC, AFPIF, ISOC https://www.afrinic.net/images/doc/af_brochure.pdf
Saingy tsy ho amin'ny sampan-draharaham-panjakana ihany ireo famerana ireo, saingy amin'ireo fikambanana sy andry manana fifandraisana mivantana amin'ny governemanta voalaza ireo ihany koa. Mety hiantraika amin'ny olona maro ihany koa izany, izay mety ho nanohitra ny fanakatonana ny aterineto nataon'ny governemanta..
Raha tsy tafiditra an-tserasera n governemanta, tsy isalasalana fa ho tsapan'ny olom-pirenena izany.
Nanazava ny fifanakalozan-kevitra amin'ny anjara toeran'ny rejisitry ny aterineto tahaka ny AFRINIC izany. Efa naneho ny ahiahiny amin'ity fitomboan'ny fanakatonana ity ny filankevi-pitantanan'ny AFRINIC, nilaza fa fandrahonana amin'ny maha-misokatra ny aterineto izany. Hatramin'ny taona 2011, efa nisy ny finiavana hanapaka ny tambajotra, izay lazaina amin'ny ankapobeny ho fanakatonana, tany amin'ny fanjakana 18 eto Afrika. Tamin'ny taona 2016 monja, fanakatonana 18 no voarakitra tamin'ny firenena 11 ary hatramin'ny Janoary 2017 mandra-pahatonga ny tapaky ny volana April, mbola mitohy ny fanakatonana any amin'ny faritra miteny anglisy ao Kamerona. Ireo fanakatonana rehetra ireo dia nitranga nandritra ny fotoana ara-politika toy ny fifidianana na fihetsiketseham-panoherana.
Ankoatra ny fahatapahana ara-tsosialy hita miharihay, dia misy fiantraikany goavana ara-toekarena ihany koa ny fanakatonana. Fa eo amin'ny sehatry ny fanaovan-dalàna ihany koa, tafiditra ihany koa ny resaka vina sy fikasan'ny governemanta Afrikana rehefa miresaka aterineto.
Milaza ho mampaka-danja ny teknolojiam-pifandraisana sy ny torohay (TIC) ireo governemanta hanatrarana ireo Tanjona Fampandrosoana tahaka ny Tanjon'ny Firenena Mikambana amin'ny Fampandrosoana Lovainjafy na ny Agenda 2063 an'ny Vondrona Afrikana. Saingy mifangarika amin'ireo hetahetam-pampandrosoana ireo ny fanakatonana — nefa dia ireo governemanta miezaka ny manatratra ireo tanjona ireo mihitsy ihany koa no mampihatra ny fanakatonana. Ohatra, ny fanakatonana naharitra telo volana tao Kamerona no nanery ireo miankina amin'ny aterineto hanaovana fihariana handao ny fihariana ataony na mifindra mankany an-tanandehibe hafa.
Naneho ny ahiahiny i Seun Odejedi, mpaneho hevitra ao amin'ny Rejisitra, amin'ny ho fiantraikan'ny tolokevitra amin'ireo olona ankoatra ny mpitarika na mpiasam-panjakana :
…there is a proverb that says “if we are to burn a snake in its length we will burn the house as well”. We should be very careful what we ask at RIR policy level because in the long run, it would not hurt the government more than AFRINIC members (current and future).
…misy ohabolana iray milaza hoe “raha mandoro ny bibilava manaraka ny halavany isika dia handoro ny trano ihany koa”. Tokony hitandrina tsara isika amin'izay tadiavintsika eo amin'ny sehatry ny (RIR) satria, any aoriana any, dia ny mpikambana ao amin'ny AFRINIC (ankehitriny sy ho avy) no mety hidonany bebe kokoa fa tsy ny governemanta.
Eo ampanadihadiana ny tolokevitra indrindra amin'izao fotoana izao ny fikambanana AFRINIC, izay ahitana manampahaizana ara-teknika sy manampahaizana ara-politika fanaovan-dalàna. Misy ireo milaza fa tsy mety aminy ilay RIR haka ny toeran'ny mpanaramaso ny fampiasana ny aterineto. Ny hafa indray manahy ny amin'ny ho fiantraikan'ny tolo-kevitra eo amin'ny sehatry ny fampahombiazana ny asam-panjakana amin'ny alalan'ny aterineto, tahaka izay mitranga ao Rwanda ohatra, izay ahafahan'ny orinasa misoratra anarana an-tserasera. Eo an-tampon'ireo fanahiana rehetra ireo, maro ny fampahafantarana sy ny torohay natao ho an'ny daholobe no efa hita an-tserasera amin'ny alalan'ny tranonkalan'ny governemanta, toy ny lalàna sy ny toerana ahitana ireo sampan-draharaham-panjakana. Raha tsy tafiditra an-tserasera izany dia tsy isalasalana fa dia ho tsapan'ny olom-pirenena izany toe-javatra izany.
Misy ihany koa avy eo ny resaka tsenan'ny Teknolojian-torohay eto Afrika. Iray ihany ny Mpanome Tolotra Aterineto, izay an'ny fanjakana, any amin'ny firenena tahaka an'i Ethiopia, izay nahitana fanakatonana in-telo tamin'ny herintaona. Midika izany fa ny fandavana fanomezana fitaovana [serasera] ho an'ny governemanta Ethiopiana sy ireo sampan-draharaha mifandray aminy dia midika tsy fisian'ny fitaovana [serasera] ho an'ny firenena iray manontolo. Raha maro ireo firenena Afrikana no efa nanalalaka ny Teknolojian-Torohay (TIC), dia firenena vitsy monja eto amin'ny kaontinanta no nahatratra ny fifaninanana lavorary. Maro ireo ahitana mpiantsehatra iray na roa na telo manjakazaka ary amin'ireo no tena anaovan'ny governemanta fanakatonana. Tokony heverina indray mandeha noho izany ny tolokevitra mba ho kely araka izay tratra ny fiantraikany ratsy any amin'ny olom-pirenena.
Ankilan'ireo fanafana sy fanasaziana ireo, mbola mifanakalo hevitra amin'ny hoe noho ny faharatsian'ny fanaovan-dalàna [politika] ve no mahatonga ny fanakatonana mpitranga sa mariky ny fahalemen'ny fampiharan-dalàna izy io. Ny sasany amin'ireo mpikambana kosa indray maka ny zoron-kevitra fa eo ampelatanan'ny olona iray – ilay olona eo amin'ny fahefana – ny fanapahan-kevitra hanakatona ny aterineto ao amin'ny firenena afrikana iray. Ny fanohintohinana an-tambajotra nitranga tamin'ny herintaona dia azo tondroina ho nataon'ny mpanapaka voalaza mazava tsara. Ny niavian'ny fahatapahan'ny media sosialy tao Ogandà ohatra dia azo anondroana ny filoha Museveni ary ny tao Zimbabwe azo anondroana ny Filoha Mugabe. Misy fihevitra an-tsekoly iray milaza fa ho vita hatreo ny fanakatonana eto Afrika rehefa voahaja ny fotokevitra tahaka ny fahamaroan-kevitra sy ny fampandrosoana tsara rindra.
Vaovao ny tolokevitry ny AFRINIC — manosika ny fetran'ny anjara toeran'ny fikambanana izy io ary manokatra ho hitan'ny rehetra ny lonilony anatin'ny maro rehefa tsy mety tafiditra aterineto ry zareo na rehefa raisina araka izay tiana tsy misy fampitandremana ny fanapahan-kevitra hanakatona ny aterineto. Na hiroso ny tolokevitra na tsia, dia efa niteraka resaka goavana izay mety hitohy mandritra ny Vovonan'ny Aterineto eto Afrika hotontosaina ao Nairobi amin'ity taona ity izany. Satria any amin'ny farany any dia tsy maintsy handrafitra vahaolana manoloana ny fironana mampidi-doza manakatona ny aterineto mandritra ny fotoana mampirehidrehitra ny politika ny Afrikana.